UN xogta heerka sarrifka ee 26/06/2022 22:30
Oo shilin Soomaali si Dollar sarrifka maanta. Oo shilin Soomaali qiimaha US dollar maanta.
Oo shilin Soomaali si Dollar sarrifka maanta
1 Oo shilin Soomaali (SOS) uyeelaysaan 0.001732 US dollar (USD)
1 US dollar (USD) uyeelaysaan 577.43 Oo shilin Soomaali (SOS)
Sicirka sarifka lacagaha ayaa leh celcelis ahaan qiime maalin kasta marka loo eego natiijooyinka ganacsiga sarrifka waxaana maalintaas loo dejiyey bangiga qaranka. Qiimaha sarrifka lacagaha Oo shilin Soomaali to US dollar oo laga soo qaatay keydka macluumaadka lagu kalsoon yahay. Sarrifka lacagaha waxaa lagu sameeyaa bangiyada ama baanka khadka tooska ah ee qadka iyadoo lagu saleynayo heerka sarrifka rasmiga ah ee lagu soo bandhigay boggan. Waa tan tixraaca maalinlaha ah oo bilaash ah oo ku saabsan sicirka sarrifka lacagaha.
Sarrifka Dibadda updated 27/06/2022 sida laga soo xigtay xogta UN.
1 Oo shilin Soomaali waa u siman yahay 0.001732 US dollar ee bangiga Yurub maanta. 1 Oo shilin Soomaali ayaa hoos u dhacay -0.0000046820640274251 US dollar maanta waa bangiga ugu weyn Yurub. Oo shilin Soomaali sarrifka lacagaha ayaa maanta hoos u dhacaya Sida ku xusan xogta yurubiyanka, US dollar 1 Oo shilin Soomaali hadda waa qaali 0.001732 US dollar - saamiga bangiga Yurub.
Beddelaan Oo shilin Soomaali In US dollar Oo shilin Soomaali In US dollar ku nool suuqa sarrifka Forex Oo shilin Soomaali In US dollar taariikhda qiimaha sarrifka
Oo shilin Soomaali In US dollar Heerka Sarrifka maanta 26 June 2022
Aad bay ugu habboon tahay in la isbarbardhigo Oo shilin Soomaali to US dollar sicirka sarrifka ee maalmihii ugu dambeeyay miiska sicirka sarrifka ugu dambeeyay ee boggan. Jadwalka waxaa ku jira sicirka sarrifka maalmihii ugu dambeeyay. Isbarbar dhig qiimaha sarrifka ee maanta, shalay, iyo maalmihii u dambeeyay si aad u ogaato heerka koritaanka ama dhicitaanka lacagta la doortay. Waa muhiim in la arko ma aha oo kaliya sicirka sarrifka ee maanta, laakiin sidoo kale sicirrada shalay iyo maalintii ka hor.
27.06.2022 0.001734 -0.0000046820640274251 ↓
26.06.2022 0.001739 -
25.06.2022 0.001739 -0.000028766596981438 ↓
24.06.2022 0.001768 -0.000017737856262915 ↓
23.06.2022 0.001785 0.000089341668350796 ↑
1 000 Oo shilin Soomaali hadda waa mudan yihiin 1.73 US dollar. 5 000 Oo shilin Soomaali hadda waa mudan yihiin 8.66 US dollar. Qiimaha 10 000 Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka waa 17.32 US dollar. 43.30 US dollar qiimaha 25 000 Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka hadda. 1 Oo shilin Soomaali waa u siman yahay 0.001732 US dollar marka loo eego sicirka sarrifka ee bangiga qaranka maanta. 1 Oo shilin Soomaali ayaa hoos u dhacay -0.0000046820640274251 US dollar maanta iyada oo loo eegayo heerka sarrifka bangiga guud ee dalka.
1.73 USD 8.66 USD 17.32 USD 43.30 USD 86.59 USD 173.18 USD 432.95 USD 865.91 USD
Marka loo eego 1 USD waxaad ubaahantahay inaad bixiso 577.43 Oo shilin Soomaali . 2 887.14 Oo shilin Soomaali maanta waa qaali 5 USD sicirka sarrifka. 5 774.28 Oo shilin Soomaali maanta waa qaali 10 USD sicirka sarrifka. Qiimaha 25 US dollar sicirka sarrifka waa 14 435.71 Oo shilin Soomaali. Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka ayaa maanta laga soo horjeedaa US dollar. Maanta, 1 Oo shilin Soomaali kharashyada 0.001732 US dollar ee bangiga qaranka ee dalka.
577.43 SOS 2 887.14 SOS 5 774.28 SOS 14 435.71 SOS 28 871.42 SOS 57 742.84 SOS 144 357.10 SOS 288 714.20 SOS